people Nepal » विदेश जाने श्रम स्वीकृति अनलाइनबाटै कसरी लिने ? (तरिकासहित) विदेश जाने श्रम स्वीकृति अनलाइनबाटै कसरी लिने ? (तरिकासहित) – people Nepal
२९ माघ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि पनि अनलाइन सिस्टम लागू गरेको छ । तर, प्राविधिक अष्पष्टताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू यसबारे अन्यौलमा छन् ।
अहिले ब्यक्तिगत स्वीकृति लिने र श्रमको रि-इन्ट्री गर्ने कामदारहरुको आवेदन पनि अनलाइनबाट बुझ्न थालिएको छ ।
सबै किसिमका स्वीकृतिमा अनलाइन सिस्टम सुरु भएपछि श्रम इजाजतको प्रक्रियाका लागि कामदारलाई एउटै कामका लागि बारम्बार काठमाडौंको तहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छैन । श्रमका लागि उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइन आवदेन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
सबै प्रक्रिया टुंगिएपछि श्रम स्वीकृतिको स्टीकरका लागि मात्रै कामदारहरुले पासपोर्ट लिएर विभागमा जाँदा हुनेछ ।
विभागले यो सिस्टमलाई ‘फरेन इम्प्लोयमेन्ट इन्फरमेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफइआइएमएस) नाम दिएको छ । यो सिस्टमबाट पहिलो चरणमा व्यक्तिगत रुपमा विदेश जान लागेका र श्रम इजाजत नवीकरणका लागि आएका युवाको कागजी दस्ताबेज अनलाइनमा बुझ्न थालेको छ ।
यसमा आफ्नो नाम, ठेगाना, पासपोर्टका विवरण लगायत सबै कानुनी व्यक्तिगत डिटेल अनलाइनमा राख्नुपर्छ । यो राखेपछि सिस्टममा पछि ‘लग इन’ हुन आफ्नो एउटा युजर र पासवर्ड पनि सेट गर्नुपर्छ । यो फेसबुक बनाएजस्तै सरल प्रक्रिया हो । इन्टरेनेटमा आफ्नो डाटा राख्न सक्नेले यसलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् ।
त्यसपछि बैंकमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबापत तोकिएको शुल्क जम्मा गर्न सकिनेछ । पहिलेजस्तो ताहाचलमै रहेका सीमित बैंकहरुका काउन्टरमा हैन, देशका ठूला ६ बाणिज्य बैंकका जुनसुकै शाखाबाट सरकारको खातामा रकम जम्मा गराउन सकिनेछ ।
विभागले झण्डै ६ वटा बैंकसँग कामदारले जहाँसुकैबाट रकम जम्मा गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ । यसअघि सीमित बैंकमा केही काउन्टरबाट मात्रै सरकारले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्दा कामदार घन्टौं लाममा बस्नुपर्ने समस्यामा छन् ।
अनलाइन श्रम कसरी एप्लाइ गर्ने ?